I-China Jet Mill WP System – Faka isicelo efektri ye-Agrochemical Field nabakhiqizi | Qiangdi
I-Fluidized-bed Jet mill empeleni iyithuluzi elinjalo lokuthi Izinto ezifakwe emshinini omkhulu ngumphakeli wokulinganisa, into eyimpuphu ingena endaweni yokuhlukanisa, bayathintana egumbini lokugaya ngesenzo samandla we-centrifugal kusuka ngejubane elikhulu ijikelezisa isondo lokwahlukanisa kanye ne-centripetal ye-fan esalungiswa, i-powder efanelekayo iqoqwa yisiphepho kanye nesihlungi sesikhwama, i-powder enkulu iyaqhubeka nokugaywa.
Inqubo yokusebenza nezinyathelo
Okokuqala, okuphakelayo kwempahla eluhlaza okwavela ku-feeder - ukudluliselwa kwento kuya kumamitha amathathu okuqala3mixer for premixing, futhi othatha izintuli uzoqoqa uthuli ngesikhathi senqubo yokudla, bese kuba ngu-3m ​​wesibili3i-mixer esitolo okuxubekile, bese ufaka isigayo se-jet sokugaya, usayizi wezinhlayiyana zokukhipha ungalungiswa ngokulungisa ijubane elihlukile lokujikeleza kwesondo lokwahlukanisa,. Ngemuva kokugaya, okokusebenza kuzodlulisela esivunguvungwini ngamandla we-centripetal we-fan fan kanye nomqoqi wothuli ngaphezulu kwe-4m yokuqala3 mixer, bese udlulisela ku-4m wesibili3 mixer yokuxuba ngaphambi kwephakeji noma ukudlulisela kusistimu ye-WDG.
Jet Mill System - Faka isicelo kuhlelo lokugeleza kwe-Agrochemical
Uhlelo lwe-WP luyinhlanganisela ephelele yobuchwepheshe bokugaya i-jet, ubuchwepheshe bokuxuba kanye nobuchwepheshe bokulawula okuhlakaniphile. okuwumkhiqizo owenelisayo wezibulala-zinambuzane ukuxuba nokuxuba okuningi, Okwamanje, ihlangabezana nesicelo semvelo sokuthi kungabikho uthuli phakathi nenqubo yonke.
Sineziphiwo ezingaphezu kwezingu-10 zobuchwepheshe eziye zasebenza ekwakhiweni kohlelo iminyaka engaphezu kwengu-20 embonini ye-powder futhi saba nokuhlangenwe nakho okucebile kokugaya, ukuxuba, ukomisa, ukufaka i-pelletizing, ukupakisha nokuhambisa i-powder. emigqeni yokukhiqiza ye-Agrochemical WP / WDG, Singakwazi ukuklama i-flowchart ngokuya ngezidingo zamakhasimende ukuhlangabezana nezidingo zokuchotshozwa kwamakhasimende zezinto ezahlukahlukene.
Ishadi lokugeleza lombhede we-Fluidized-bed Jet Mill WP Line
Inqubo yokugaya isebenzisa umugqa osebenzayo we-jet mill jet wokusebenza ngokusebenza kahle, futhi ukusatshalaliswa kosayizi wezinhlayiyana kufana.
Inqubo yokudla inezinto zokususa ingcindezi yokuhamba emoyeni, i-exhauster iyangezwa ukuvimbela ukuphuma kothuli.
3.Both inqubo yokuqala neyokugcina yokuxuba basebenzisa izixubanisi zesikulufu noma i-ribbon blender evundlile evundlile eqinisekisa ukuthi ukuxuba kwanele futhi kuyalingana.
4.The umkhiqizo esitolo esingaxhuma ngqo umshini auto nokupakisha.
5.Lonke uhlelo lilawulwa ngokulawula okukude kwe-PLC. Ukusebenza okulula nokugcinwa, ukusebenza kwemishini ezenzakalelayo.
Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi: kungonga amandla angama-30% 30 40% uma kuqhathaniswa namanye ama-pulverizers womoya womoya.
7. Kusebenza ekuchobozeni izinga lokuxuba okuphezulu izinto ezilukhuni zokuchoboza nezinto ezibonakalayo.
Izinzuzo ze-flow-scheme ehlukile
Imodeli eqhubekayo，Kusetshenziswe ekukhiqizweni ngobuningi (Umkhiqizo onconyiwe we-QDF-400 womkhakha we-agrochemical)
1 .Ukuxhumeka kwepayipi phakathi komqoqi wothuli nemikhiqizo ephelile kuvimbela ukuphuma kothuli, akuboni ukupakisha kothuli futhi akukho kungcoliswa.
I-2.Twin screw mixer ine-stirrer ende ne-screw design, egcina izinto zixubana ngokuphelele ekuhlaleni phansi ngaphansi kwesenzo se-revolution nokuzungeza.
B. Imodeli eqhubekayo, Isetshenziselwe ukukhiqizwa kwesisindo (QDF-400 Horizontal spiral ribbon mixer design)
1 .Raw impahla hopper has kuhlangana induku design, futhi isikulufa kwanele eside kuze phansi ukugcina impahla ukugeleza kahle.
I-2.I-Horizontal Kuvunguza iribhoni lokuxuba: Kuyinto elula ukwenza imikhiqizo ethile edinga ukwengeza i-adjuvant noma amanye amakhemikhali kumkhiqizo ophelile. Futhi ukuxuba kungcono kakhulu futhi kunembe kakhulu kune-twin screw mixer. ukuphakama komzimba okuphansi kune-Twin screw mixer, okulula ukuyifaka.
Imodeli eqhubekayo C. Kusetshenziswe ekukhiqizweni (QDF-600 Twin screw mixer design)
Kokubili inqubo yokuxuba yokuqala neyokugcina isebenzisa ama-agitators ama-screw amabili aqinisekisa ukuthi ukuxuba kwanele futhi kuyalingana. Idizayini eyindilinga igcina okokusebenza kugeleza kahle ngokushelela.
Imodeli eyenziwe lula, Isetshenziselwe ukukhiqizwa kwe-batch (imodi yokudla ephezulu ye-QDF-400)
Inzuzo: Isihlukanisi seSiphepho nomqoqi wothuli: Faka imitha yokudlidliza engxenyeni yesigaxa ukugwema ukuqoqwa kwempahla.
Imodeli eyenziwe lula, Isetshenziselwe ukukhiqizwa kwe-batch (imodi yokudla ye-QDF-400 Bottom)
Inzuzo: Isihlukanisi seSiphepho: Faka isihlukanisi sesiphepho esisodwa ngemuva kokuphakela ukusabalalisa isiqondiso sokugeleza kwempahla eluhlaza futhi uvikele ukuqongelela izinto.
Ifektri yezolimo yasePakistan, ama-Pesticides kanye neHerbicides powder ukugaya, Isethi eyodwa yemigqa yokukhiqiza eqhubekayo ye-QDF-400 WP, umthamo wokukhiqiza u-400kg / h, ubukhulu bezinhlayiyana D90: 45μm
Ifektri yeBurma Agriculture, Pesticides and Herbicides powder grinding, One set of QDF-400 WP simplified production lines, Production capacity 400kg / h, Particle size D90: 30μm
Ifektri Yezolimo yase-Egypt, ama-Pesticides kanye ne-Herbicides powder ukugaya, Isethi eyodwa yemigqa yokukhiqiza eqhubekayo ye-QDF-400 WP, umthamo wokukhiqiza u-400kg / h, ubukhulu bezinhlayiyana D90: 20μm
Langaphambilini I-JMP Mill yombhede wombhede we-GMP FDA
Olandelayo: QDF-400 WP Okuqhubekayo Production System Of Jet Mill For 400kg